Izindaba Umake "Ezemidlalo kanye nokuzidela" - ULLER
Wake wazibuza ukuthi okokuqala kanjani, kuphi futhi nini i-bicicleta? Ubani lowo ngqondongqondo owasishiya nale ndlela enhle yokuhamba? Kungani kunemincintiswano esemthethweni ye- ukuhamba ngebhayisikile? Kunemibuzo eminingi engenzeka kithi ngalo mdlalo. Kungakho sikulethele lokhu okuthunyelwe mayelana nokuhamba ngebhayisikili ngokujulile futhi sixazulula okunye ukungabaza kwakho.
Kuphela labo kithi abenza umkhuba we- ukuhamba ngebhayisikile siyawazi umkhuhlane ogijima emithanjeni yethu lapho sibheka imincintiswano ngamasekethe adinga kakhulu eYurophu. Yazi ukuthi yini Izikhumbuzo Zamabhayisikili noma obizwa nangokuthi ama-classics ama-5 okuhamba ngebhayisikili; izinhlanga ezinomlando omningi, ezilungiselela abagibeli bamabhayisikili abanamandla kakhulu ukubhekana nemincintiswano emikhulu. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Umdlalo ongenamithetho? Kungahle kube nenkululeko ethile ekusebenzeni kwe- ski I-Freeride, kepha khumbula ukuthi lapho kukhululwa kukhulu, umthwalo uba mkhulu. Landela iseluleko esikufundisa sona esihlokweni sethu namuhla, futhi ujabulele intaba isesimweni sayo esimsulwa!
Uyazi ukuthi livela kuphi leli gama I-Enduro? ukubekezela, okusho ukuthi ngesiNgisi, ukumelana. Futhi ukuthi le modality ye- MBTKudinga ukukhuthazela, isivinini kanye nenkululeko. Esihlokweni sethu namuhla, sikufundisa konke odinga ukukwazi uma ucabanga ukuzinikezela ku i-enduro ngebhayisikili MBT, enye yezindlela ezimbi kakhulu futhi ezimnandi zokuhamba ngebhayisikili ezintabeni.
Izinselelo kanye nokukwazi komuntu ukuzinqoba. Ungacabanga nje ukwenza amakhilomitha angama-226 phakathi kokugijima, ukubhukuda nokuhamba ngebhayisikili, ngaphansi kwamahora ayi-17? Kukhona abantu abaphezulu, futhi laba yibo ababambe iqhaza kokuthunyelwe kwethu namuhla, lapho sikufundisa konke mayelana no-Ironman: lo mncintiswano okuyisa emkhawulweni, amasekethe anzima kakhulu nemiphumela emzimbeni wethu, ungalokotha wenze enye yalezi ?
Kunzima ukuthola umuntu ongakaze ezwe ngeTour de France kodwa ... Ngabe ucabanga ukuthi wazi ngokuphelele konke mayelana lo mcimbi odumile wezemidlalo? Funda futhi uthole izinto eziyi-10 odinga ukuzazi ngalo mncintiswano omangalisayo, kusuka kokuyisisekelo nokubalulekile, kuya kulwazi lomlando olunelukuluku kakhulu!
Januwari 12, 2021
Ukukhuphuka intaba inkululeko yisibonakaliso sayo esiphezulu! Le ndatshana ingeyabathandi be-freeride kulo nyaka abanesifiso esikhulu kunanini ngaphambili sokuzwa ukushesha kwe-adrenaline ngemithambo yabo. Bheka izincomo zethu zezemidlalo zasentabeni ... Thola ugqozi ngathi!